SARCOIDOSIS को बारेमा
यो पृष्ठमा sarcoidosis को बारेमा सामान्य जानकारी समावेश छ। विशेष प्रकारको sarcoidosis मा जानकारीको लागि माथिको मेनु प्रयोग गर्नुहोस्। Sarcoidosis को हरेक मामला अनूठा छ, र तपाईले आफ्नो चिकित्सकलाई तपाईका उपचार योजनाको बारेमा सल्लाह गर्नु पर्छ। तलको जानकारी प्रमाणमा आधारित हुन्छ तर मेडिकल सल्लाहको लागि एक विकल्पको रूपमा लिइएन।
यो पृष्ठमा जानकारी सरकोडोसिस विशेषज्ञहरूको सहयोगको साथ संकलित गरिएको छ डा। के बीचेमन र Dr J. Galloway, रोमेमेटोलोजी, किंग्स कलेज अस्पताल, लन्डन।
Sarcoidosis के हो?
Sarcoidosis एक शर्त हो जहाँ lumps ले granulomas भनिन्छ शरीर को भित्र विभिन्न साइटहरु मा विकसित। यी granuloma सूजनमा संलग्न कक्षहरु को क्लस्टर देखि बनाइन्छ। यदि एक अंगमा धेरै अनुदान सिर्जना गर्दछ भने, यसले त्यो अंगलाई ठीकसँग काम गर्नदेखि रोक्न सक्छ। सरकोडोसिस शरीरका थुप्रै भागहरूलाई असर गर्न सक्छ। यसले प्रायः फेफड़ोंलाई असर गर्छ तर छाला, आँखा, जुत्ता, तंत्रिका तवर, हृदय र अन्य शरीरको भागलाई पनि असर पार्न सक्छ।
माथिको मेनू पट्टीमा 'सूचना' अन्तर्गत ड्रप-डाउन मेनुबाट प्रासंगिक पृष्ठ चयन गरी विभिन्न प्रकारका सरकोकोडोसिसमा थप जानकारी पढ्नुहोस्।
सर्कोडोसिस कसले घटाउँछ?
सरकोडोसिस प्राय: केही चीजको रूपमा गलत छ र कति मानिसहरू शर्तसँग जीवन बिताउने बारेमा असहमति छ। तर हामी जान्दछौं कि सरकोडोसिस दुर्लभ हो। प्रायः विशेषज्ञहरूले सहमत छन् कि हरेक 10,000 मानिसहरूमध्ये 191 मा ब्रिटेनमा सरकोडोसिस छ। हरेक वर्ष ब्रिटेनमा 3,000 देखि 4,000 मान्छे sarcoidosis संग निदान गरिएको छ।
पुरुष र महिला दुवै र साथै सबै प्रमुख जातीय दुवैमा सरकोडोसिस प्रचलित छ। त्यहाँ केही अनुसन्धान गरिएको छ कि पुरुषहरु भन्दा महिलाहरु मा यो थोडा अधिक प्रचलित छ। हाम्रो आफ्नै अनुसन्धानसँग सहमत छ - सरकोडोसिस यूकेको सामुदायिक सर्वेक्षणमा 68% उत्तरदायी महिला थिए र 31% पुरुष थिए (7,002 प्रतिभागिहरु।)
सर्कोडोसिस कुनै पनि उमेरमा हुन सक्छ, तर सामान्यतया उनीहरूको 30 वा 40 वा दशकमा वयस्कहरूलाई असर गर्दछ। हाम्रो सामुदायिक सर्वेक्षणमा 4,833 व्यक्तिहरूले उनीहरूको उमेरलाई बताए। डेटा संकेत गर्दछ कि सारा उमेर समूहहरु मा प्रचलित छ - 80% मामला 37 र 65 को बीच हुन्छ। औसत रिपोर्ट उमेर 50 थियो। (कृपया ध्यान दिनुहोस कि यो निदान मा उमेर छैन तर रिपोर्ट को समय मा प्रदान गर्दछ।)
अक्सर उद्धृत गरिएको अमेरिकी अनुसन्धान भन्छन् कि अफ्रिकी र स्क्यानिनेभियन विरासतका मानिसहरूले हालतको ठेक्काको एक ठूलो मौका पाउँछन्, एक आनुवंशिक तत्वलाई असर गर्छन्।
सरकोडोसिसको बारेमा थप पढ्नुहोस् ...
Sarcoidosis FAQs - सरकोडोसिसयू द्वारा विकसित कोरोडोसिसयू यूके नर्स, रोगी र विशेषज्ञ सल्लाहकारहरु द्वारा।
Sarcoidosis को एक उत्कृष्ट शैक्षिक अवलोकन, रथेटिक रोगहरुमा EULAR पाठ्यपुस्तिका, (2015), अध्याय 18, धारा 2, पृष्ठ 493। (EULAR प्रदान गरिएको शिविर: कृपया भ्रमण गर्नुहोस्। EULAR वेबसाइट सारा अध्याय पढ्न।)
Sarcoidosis को लागि रोगी जानकारी, ब्रिटिश थोरै सोसाइटी, थोरैक्स (2008); 63, पूरक V.
Etymology र Sarcoidosis को इतिहास
शब्द "सरकोडोसिस" ग्रीकबाट आउँछ sarcο- अर्थ "मासु", प्रत्यय - (ई) डेमो अर्थ "समान छ", र -sis, ग्रीक मा एक सामान्य प्रत्यय अर्थ "शर्त"। यसरी सम्पूर्ण शब्द भनेको "कच्चा शरीर जस्तो एक अवस्था" हो।
सरकोडोसिस पहिलो पटक 1877 मा अंग्रेजी दंत चिकित्सक डा जोनाथन हचिन्सनले वर्णन गरेकी थिइन्, अनुहार, अनुहार, अनुहार, र हातमा रथहरू उठाइयो। सन् 1 999र 1910 बीचमा सरकोडोसिसमा एभाइटिस पहिले वर्णन गरिएको थियो, र पछि 1915 मा यो बलियो बनाइएको थियो, डा। शमम्यानले, यो एक प्रणालीगत अवस्था थियो।
सर्कोडोसिसले के गर्छ?
Sarcoidosis को सही कारण ज्ञात छैन। अब सम्म सोरकोडोस ट्रिगर गर्ने कुनै पनि कारण पहिचान गरिएको छैन। यो शायद आनुवंशिक, पर्यावरण र संक्रामक कारक को एक दुर्लभ संयोजन हो। केहि परिवारमा अवस्था लाग्ने अवस्था देखिन्छ।
SarcoidosisUK कारणहरु को पहिचान गर्न र एक उपचार को खोज को लागि चिकित्सा अनुसन्धान कोष मा नेतृत्व लेइरहेका छन्। यसको बारेमा थप पढ्नुहोस् SarcoidosisUK को अनुसन्धान.
सरकोडोसिसको कारणहरू बुझ्नका लागि धेरै वेबसाइटहरू दावी गर्छन् र तपाईंलाई एक उपचार बेच्ने गर्दछ। कृपया एक वैकल्पिक उपचार विचार गर्नु अघि आफ्नो चिकित्सकलाई सल्लाह दिनुहोस्।
Sarcoidosis को लक्षणहरू के हुन्?
सरकोडोसिस शरीरको लगभग कुनै पनि भागलाई असर गर्न सक्छ। सीने मा फेफड़ों र लिम्फ ग्रंथिहरु लाई सामान्यतया शामिल हो, सरकोडोसिस संग 10 मा 10 रोगहरु लाई प्रभावित गर्दछ।
शरीरको अन्य भागहरू जुन सामान्यतया संलग्न हुन सक्दछ शरीरमा अन्य ठाउँमा छाला, आँखा र लिम्फ ग्रंथिहरू छन्।
जोडहरू, मांसपेशिहरु र हड्डियों 1 मा5रोगीहरूमा संलग्न छन्। तंत्रिका र तंत्रिका तंत्र 20 रोगीहरु मध्ये लगभग 1 मा संलग्न हुन्छन्। हृदय 50 रोगीमा लगभग 1 मा संलग्न छ।
Sarcoidosis को लक्षणहरु शरीर को कुन भाग मा प्रभावित हुन्छ मा निर्भर गर्दछ। तिनीहरू समावेश गर्न सक्छन्:
रातो र दुखाइको आँखा
पीडाहरू, मांसपेशिहरु वा हड्डिहरु
अनुहार वा अनुहार, कमजोरी, खुट्टाको कमजोरी
सरकोडोसिसका रोगीहरूले थकित र लापरवाही महसुस गर्न सक्छन्, वजन गुमाउँदोरहेछ वा प्वाल र रातो पसीरको सामना गर्दछन्।
कहिलेकाहीँ, सरकोडोसिसको लक्षण अचानक सुरु हुन्छ र लामो समयसम्म हुँदैन। अन्य रोगीहरूमा, लक्षणहरू धीरे-धीरे विकास र धेरै वर्षको लागि अन्त्य हुन सक्छ।
Sarcoidosis कसरी निदान गरिएको छ?
सर्कोडोसिस को निदान गर्न गाह्रो छ किनकी लक्षण अन्य रोगहरु जस्तै समान हुन्छन्। सोरकोडोस निदान गर्न कुनै पनि परीक्षण छैन।
तपाईंको चिकित्सक द्वारा विस्तृत इतिहास र परीक्षा सार्कोडोसिस को निदान मा सबै भन्दा महत्वपूर्ण कदम हो। उनीहरूले तपाइँको शरीरका कुन भागहरू प्रभावित हुन सक्छन् भनेर निर्धारण गर्नेछ। प्रत्येक मामला अनोखी छ, तर तपाईले डाक्टरलाई तपाइँको रक्त कोशिकाहरू, क्यालिसियम स्तरहरू र लिभर र गुर्दे कार्यलाई आशा गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरूले तपाईंलाई फेफड़ों र हृदय परीक्षण जाँच गर्न सास फेर्न सक्छ। यी सब धेरै मानक प्रक्रियाहरू हुन्।
रक्त र मूत्र परीक्षण तपाईंको चिकित्सकले तपाईंको गुर्दे र लिभर प्रकार्य र तपाईंको क्यालियम स्तरहरू जाँच गर्न, सूजनको लक्षणहरू हेर्नको लागि केही रगत र मूत्र परीक्षणहरूको व्यवस्था गर्न सक्छ। तिनीहरू एङ्गियोस्नेसिन-एन्जिमिमेण्ट एंजाइम भनिन्छ जुन तपाईंको रक्तमा मार्कर पनि जाँच गर्न सक्दछ जुन कहिलेकाहीं सार्कोडोसिसका रोगीहरूमा उठाइन्छ। उठाइएका एईसी स्तरले सार्कोडोसिसको उपस्थिति पनि संकेत गर्दैन।
फेफड़ों यदि तपाईंको चिकित्सकले तपाईंको फेफड़ोंलाई प्रभावित हुन सक्दछ, उनीहरूले सामान्यतया सीने एक्स-रे वा सीटी स्क्यान र सास फेर्ने परीक्षणहरू, सामान्यतया स्प्रिमेमेटरी परीक्षण र पुर्मनरी प्रकार्य परीक्षण (PFT) व्यवस्था गर्दछ।
स्क्यान गर्नुहोस् तपाईंको चिकित्सकले तपाईंको शरीरका अन्य भागहरू हेर्नको लागी इमेजिंग स्क्यान (सीटी स्क्यान वा पीईटी सीटी स्क्यान) पनि व्यवस्थित गर्न सक्छ तर तपाईले कुनै पनि लक्षणहरू सिर्जना गर्नुहुन्न। हृदय इलेक्ट्रोकार्डियोयोग्राम (ईसीजी) वा एकोकार्डियोोग्राम (इको) को प्रयोग गरेर स्क्यान गरिएको हुन सक्छ। यी सबै स्क्यानहरूले ऊतक वा सुगन्धको रूपमा ऊतकमा ग्रेलोमास लगाउनेछ।
बायोप्सी Sarcoidosis को निश्चित निदान गर्न को लागि ऊतक (बायोप्सी) को एक नमूना सूजन (granuloma) को एक क्षेत्र ले लिया गएको छ।
सरकोडोसिसले शरीरको धेरै फरक भागहरूलाई असर गर्न सक्दछन्, तपाईंको चिकित्सकले तपाइँलाई पनि हेर्नको लागी अन्य विशेषज्ञहरू (जसले सरकोडोसिस द्वारा प्रभावित तपाईको शरीरको भागमा विशेषज्ञता गर्न सक्छ) हुन सक्दछ।
अधिकांश रोगीहरूमा सरोकोडोस प्रायः समाधान गर्दछ। अरूमा, अवस्था निरन्तर हुन सक्छ तर उपचारको आवश्यकता पर्दैन।
अल्पसंख्यक जसले रोगको बढी गम्भीर 'पुरानो' रूप विकास गर्छ, थप आक्रामक र लामो उपचारका लागि कहिलेकाहीं आवश्यक पर्दछ।
जीवन-खतरनाक लक्षणहरूसँग उपस्थित रोगीहरूको पनि सानो अनुपात, विशेष गरी ती व्यक्तिहरूमा हृदय वा तंत्रिका संलग्नता।
1-7% रोगीहरू सार्ककोडोसिसबाट मर्छन् (यो आकृतिले जनसंख्या अध्ययन र सरकोडोसिसको प्रकारको आधारमा व्यापक रूपमा भिन्न हुन्छ)।
स्वस्थ जीवन बिताउने
कहिलेकाहीं रोगीहरूको लक्षण अचानक खराब हुन सक्दछ ('भित्री-अप')। यो तनाव, बीमारी वा केहि पहिचान गर्न योग्य द्वारा ट्रिगर हुन सक्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं स्वस्थतापूर्वक खान, आफुलाई गति, साथी र परिवारसँग कुरा गर्नुस् र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू चिन्न सक्नुहुन्छ। यो सरकोडोसिस रोगीहरूलाई थप जानकारी चाहिएको छ कि पोषण र आहारले उनीहरूको अवस्था कसरी मद्दत गर्न सक्छ भन्ने जानकारी दिन्छ। SarcoidosisUK लाई थाहा छ कि यो एक महत्वपूर्ण र जटिल मुद्दा हो - हामी यो वेबसाइट को माध्यम ले धेरै जल्द नै पोषण संबंधी मार्गदर्शन प्रदान गर्न चाहते हो। कृपया संपर्क SarcoidosisUK पेशेवर समर्थनको लागि।
Sarcoidosis को लागि कुनै ज्ञात इलाज छैन। बीमारीले लगभग 60% रोगीहरु लाई औषधि को बिना बिना असाधारण समाधान गर्न सक्छ। यस अवस्थामा तपाईँले भेट्टाउन सक्नुहुनेछ कि तपाइँको डाक्टरले तपाईलाई केहि महिनाको लागि मात्र निगरानी गर्नेछ।
रोगीहरूको लागि कहिलेकाहीँ उपचार आवश्यक छ 1) अंगलाई असफलताको खतरामा र / वा 2) जीवनको गुणस्तरको महत्त्वपूर्ण हानि अनुभव गर्दछ। कहिलेकाहीँ सरल पित्तालीहरू (पेरोसेमोल वा गैर-स्टेरॉयडल इन्सुलेटर जस्तै इबोप्रोफन) लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
केहि रोगीहरु लाई सम्भावना चाहिन्छ, जसमा कार्डियक र न्यूरोलोजिकल भागीदारी सहित।
Corticosteroids प्रभावित अंगमा सूजन कम गरेर sarcoidosis को उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यी प्रतिरक्षा औषधिको रूपमा चिनिन्छ। सबै भन्दा सामान्य प्रयोग कोर्टिकोस्कोडेर prednisolone हो (संयुक्त राज्य अमेरिका मा prednisone)। यो ट्याबलेटको रूपमा लिइएको वा उच्च खुट्टामा दिइन्छ। पूर्वसेन्सलोनसँग उपचार कम्तीमा6देखि 24 महिनासम्म आवश्यक पर्दछ।
कहिलेकाहीँ कोर्टिकोस्टरोइड्स प्रभावकारी नहुन सक्छ, वा गम्भीर साइड इफेक्टहरूको कारण हुन सक्छ। तपाईंको डाक्टरले स्टेरॉइड उपचारका फाइदाहरू र साइड इफेक्टहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ। साइड इफेक्ट प्रमुख हुन सक्छ र रक्तचाप, मधुमेह, ओस्टियोपोरोसिस, वजन बढ्ने, र चोट लगाउन सक्दछ।
Immunosuppressant दुर्व्यवहारहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, वैकल्पिक रूपमा वैकल्पिक औषधि वा संयोजनको रूपमा, स्टेरॉइड खुसी कम गर्न। यी औषधिहरू प्रायः मेथीट्रेक्स, एज्थीथीप्रेन वा माइकोफेनटल।
Sarcoidosis को पुरानो अवस्था सामान्यतया लागूपदार्थहरूद्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। दुर्लभ अवस्थामा, केही बिरामीले अक्सीजन र फेफडा प्रत्यारोपण गर्न आवश्यक छ। तुरुन्तै, हृदयमा क्षति वा नजिकैको व्यक्तिले प्यासिमेकर वा अन्य उपचार आवश्यक पर्दछ। अन्य उपचार पनि आवश्यक हुन सक्छ जब आँखा र छाला sarcoidosis द्वारा प्रभावित हुन्छ। विशेष प्रकारका sarcoidosis को लागी अधिक जानकारीको लागि माथि मेनु प्रयोग गरी विशेष पृष्ठहरू जाँच गर्नुहोस्।
के तपाईं पन्फुरी sarcoidosis छ? सरकोडोसिसले तपाईंको फेफड़ोंलाई असर गर्छ। अधिक जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
के तपाईं छाला sarcoidosis छ? Erythema नोडोसम, लुपस पेरेरियो र लेन्स आम संकेत हुन्। थप पढ्नुहोस्।
सरकोडोसिस रोगीहरूको आधा आँखा आँखाका लक्षणहरू अनुभव गर्छन्। कसरी सरकोडोसिस आँखाले असर गर्न सक्छ भन्ने बारेमा थप पढ्नुहोस्।
सरकोडोसिसले तपाईंको जोडीहरू, मांसपेशिहरु वा हड्डियोंलाई असर गर्छ? थप जानकारी खोज्नको लागि तल क्लिक गर्नुहोस्।
सरकोडोसिस तंत्रिका तंत्र (न्यूरोसाराकोडोसिस) लाई असर गर्न सक्छ। थप पढ्नको लागि तल क्लिक गर्नुहोस्।
सर्कोडोसिस फेर्न फेफड़ों मा sarcoidosis को परिणाम को रूप मा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूप दिल को प्रभावित गर्न सक्छ। यहाँ थप जानकारी पढ्नुहोस्।